आर्थिक Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperआर्थिक Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं । भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । १ जुन (१८ जेठ) देखि कार्यान्वयन हुनेगरी भारतले आफ्नो मुलुकबाट हुने चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले १ जुनदेखि अक्टोबर ३१ (चार महिना) सम्मका लागि चिनी र त्यसका सबैखाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको इकोनोमिक्स टाइम्सले […]
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक बृद्धि
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले पुरुष र महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक बृद्धि गरेको छ । मंगलबार क्यान कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पुरुष राष्ट्रिय टोलीमा रहेका तीनै ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक मासिक १० हजारका दरले बढेको छ । सन् २०१७ देखि क्यानले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरी केन्द्रीय अनुबन्धनको व्यवस्था सुरु गरेको […]
व्यापारिक समूहलाई प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सुम्पिने, व्यावसायीकै स्वार्थअनुसार नीति बनाउनेजस्ता काम भए भनेर पोखरामा यसअघि निकै विरोध पनि भए, व्यापारिक स्वार्थकै कारण ठूलो राजश्व पनि महानगरबाट गुमिरहेको छ, तपाईं त झन् व्यापारिक पृष्ठभूमिकै मान्छे ! पाेखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले भन्नुहुन्छ,’ मेयर भएपछि मैले पहिलो पटक यो अन्तर्वार्ता दिएको छु र यसैलाई आधार […]
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो अभियानलाई सफल पार्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ अघि सारिएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील […]
हरि बास्ताेला, पोखरा। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३ ढाँडबेसीस्थित आर्वा विजय माध्यमिक विद्यालयको पक्कि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भारत सरकारको तीन करोड ९८ लाख ३४ हजार आर्थिक सहयोगमा दुई तल्ले १६ कोठे पक्कि भवन निर्माण गरिएको हो । भारतीय राजदूतावासका चार्ल डी अफेयर्स नामग्य सी खम्पा र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर […]
काठमाडौं । १५ विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योग,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई मन्त्रालयमा भेटेर विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । एलपी ग्यास र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउन विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको पुर्नविचार, […]
विराटनगर । इन्धनको मुल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदेश- १ को मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर राखेर प्रदर्शन गरेका छन् । खाना पकाउने ग्यासमा सिलिन्डर २ सय रुपैयाँ, पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । मुल्य वृद्धिको विरोधमा मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । मनलाग्दी भएको मुल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएपछि प्रदर्शनमा […]
लन्डन । नेपालीको पहलमा लन्डनमा पहिलो बौद्ध गुम्बा स्थापना भएको छ। डायमन्ड बुद्धिष्ट सेन्टर यूकेद्वारा साउथ इष्ट लन्डनको वुल्लीचमा निर्माण गरिएको गुम्बा गतसाता उद्घाटन गरिएको छ। सेन्टरका अध्यक्ष एवम् गुम्बाका संस्थापक सुमलकुमार गुरुङले करिब पाँच हजार पाउन्ड (आठ करोड रुपैया) को लागतमा गुम्बा स्थापनाको कार्य पूरा भएको जानकारी दिनुभएकाे छ। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि बेलायतस्थित नेपाली […]
काठमाडौं। सुनको मूल्य तीन दिन देखि स्थिर छ । गत शुक्रबार तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेपछि त्यसयता सुनको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अहिले छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९८ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै तेजावी सुनको मूल्य ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य १२ सय ७० रुपैयाँमा […]